Waa maxay lambarka fiisadu? Waxaan ku tusineynaa sida loo helo | Wararka Safarka
Waa maxay lambarka fiisadu?
Monica Sanchez | | Talooyin
Haddii aad qorsheyneyso inaad safar ugu baxdo waddan, waxaad u baahan doontaa sida caadiga ah Fiiso. Kani waa rukhsad hore oo laga siiyay wadanka loo socdo iyada oo loo marayo qunsuliyada ama safaarada wadanka asalka ah. Waxaa jira fiisooyin noocyo kala duwan ah, waxayna ku xirnaan doontaa muddada aad qorsheyneyso inaad sii joogto, xulashada mid ama tan kale.
Qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa meesha iyo sida ay tahay inaad u codsato, oo waxaan kaa caawin doonaa inaad hesho lambarka fiisahaaga. Ha moogaan
1 Fiisaha ama fiisaha, dukumintiga lagama maarmaanka u ah safarka
2 Shuruudaha lagu dalbado fiisaha
3 Noocyada fiisaha
4 Waa kuwee dalalka u baahan fiisaha muwaadin Isbaanish ah?
5 Sidee loo codsadaa fiisaha dalxiiska?
6 Fiiso ma ii diidi karaan?
7 Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in fiiso lagu shaqeeyo?
8 Waa maxay lambarka fiisadu?
Fiisaha ama fiisaha, dukumintiga lagama maarmaanka u ah safarka
Fiisaha ayaa ah dukumiinti ay ku lifaaqan yihiin baasaboorada masuuliinta taas oo muujineysa in dukumiintiga la baaray loona arkaa inuu ansax yahay. Waa qasab in lagu xidho wadamo badan. Tusaale ahaan, Mareykanka, haddii aad maalmo kooban qaadaneyso ama haddii aad rabto inaad ku noolaato, waa inaad raacdaa, maxaa yeelay haddii kale garoonka diyaaradaha ayay kaa dhigayaan inaad asalkaagii ku noqoto.
Shuruudaha lagu dalbado fiisaha
Shuruudda keliya ayaa ah taas joogitaanku waa inuu ka badnaadaa 90 maalmood (saddex bilood).
Guud ahaan, waxaa jira laba nooc oo fiiso ah:
Joog: Kani waa kan ay tahay inaad codsato haddii aad safar ama safar waxbarasho u timaadid.
Degenaansho: haddii aad u timid inaad shaqeyso (iskaa u shaqeysato ama shaqaysato) ama aad u joogtid inaad ku noolaato.
Laakiin waxay kuxirantahay wadanka iyo sababta aad u safreyso, waxaa jira qaar kale oo badan:
Shaqo ku meel gaar ah
Diblomaasiyiinta, saraakiisha, shaqaalaha ururada caalamiga ah iyo NATO
Waa kuwee dalalka u baahan fiisaha muwaadin Isbaanish ah?
Haddii aad tahay Isbaanish oo aad u safreyso mid ka mid ah dalalkan, marka lagu daro Mareykanka, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato fiiso:
Sidee loo codsadaa fiisaha dalxiiska?
Fiisaha dalxiiska, oo sidoo kale loo yaqaan B2, waa dukumintiga aad ugu baahan tahay inaad ugu safarto waddan. Way ku caawin doontaa daawashada, booqashada qoyska ama saaxiibbada, ama daaweyn caafimaad; halkii, ma awoodi doontid inaad u adeegsato inaad ku shaqeyso. Haddii Laanta Socdaalku ogaato, way baajin karaan fiisadaada.
Tani waa fiiso aan soo galooti ahayn, taas oo macnaheedu yahay in mabda 'ahaan aadan qorsheyneynin inaad si joogto ah u deganaato dalka. Haddii aakhirka aad bedesho maskaxdaada, waa inaad dalbataa fiisada u dhiganta.
Si aad u codsato, Waa inaad tagtaa safaarada ama qunsuliyada wadanka aad u socoto ee wadankaaga. Qaado sawir adiga oo muujinaya wejigaaga iyo baasaboorkaaga sifiican. Sidoo kale dhib malahan inaad qaadato kaarka amaahda, maadaama xaalado badan lagaa rabo inaad lacag bixiso.
Fiiso ma ii diidi karaan?
Waa dhif, laakiin runtii waxay kuxirantahay kiis kasta. Si tan looga fogaado, iskuday inaad ku qanciso sarkaalka qunsuliyada in, marka hore, kuma talo jirto inaad joogtid oo aad noolaato iyo, labaad, inaad haysato ilo kugu filan. Sababtaas awgeed, waa inaad ogaataa in haddii aad dalbatay kaarka joogitaanka oo aad dalbatid fiiso, ay u badan tahay inaysan midna ku siin doonin.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in fiiso lagu shaqeeyo?
Haddii aad wax walba gacanta ku dhiibto oo ay soo baxdo in dukumintiyada loo baahan yahay ay sax yihiin, inta badan wax kama badan ayey ku qaadataa shan maalmood oo shaqo. Ma badna, waadna ka faa'iideysan kartaa inaad qorsheyso safarkaaga.
Markaad heysato, waxaad u badan tahay inaad la yaabban tahay waxa uu yahay lambarka fiisada, maadaama kaararkaani ay leeyihiin a tiro aad u tiro badan taasi waxay leedahay astaamo u gaar ah, markaa aan aragno sida ugu dhakhsaha badan ee aan ku aqoonsan karno.
Si aan awood ugu helno lambarka Visa-ka dukumintiga, kaliya waa inaan gacanta ku haynaa oo aan ka arki karnaa dhanka hore. Sidan oo kale, waxaan kaliya ku eegaynaa qaybta hoose ee midig macluumaadka ku jira guduudka, si sax ah taxanaha tirooyinka soo bandhigaya astaamahan lambarkeenna Visa ee muddada dheer la sugayay.
Ma heshay? Hada waa inaad sameysaa qor lambarka fiisada ama xafidi si looga fogaado dhibaatooyinka. Marka taa laga reebo waa inaadan wax dhibaato ah ku qabin inaad heli karto lambarka fiisaha, badanaa kuma kala duwana.
Lambarka fiisaha ayaa kaa caawin doona cusboneysiin fiisadaada haddii aad rabto inaad waxyar sii dheeraato. Dabcan, xusuusnow, haddii sababta safarkaagu isbedesho, waxaa muhiim ah inaad dalbato fiisada u dhiganta. Markaa uma baahnid inaad wax ka walwasho.
Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay inaad ogaato waxa fiisada ay tahay, waxa loogu talagalay iyo sida loo helo lambarkaaga. Safar wanaagsan!
Baasaboorada ugu fiican uguna liita ee lagu safro adduunka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Talooyin » Waa maxay lambarka fiisadu?
Nooca fiisaha (B1 / B2) ee ka imanaya EU ee aan leeyahay barcode, mar hore ayaan iskaaniyay waana isku mid ka muuqda dhanka midig ee barcode, dhamaadka kale fiisaha, laakiin xilligan ee waxaan ku qoraa foomka safarka ee i weydiinaya, ima aqoonsana. Waxay leedahay waa inay noqotaa warqad ay ku xigto 7 lambar (#s) ama 8 lambar (#s) waxayna ku taal qaybta hoose ee midig ee dukumintiga waana halka ay ku taal lambar aan horay u tilmaamay oo aan sameeyay looma helin waxaa loo aqoonsan yahay lambarkayga fiisaha.
Safarka Emirates, Fly Emirates
Talooyin si aad u hesho duulimaadyo aad u jaban